Ticketing Executive Archives - Glory Assumption Space
Senior Ticketing Executive – Male /Female – (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Travel & Tour Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ ချက်ချင်း အင်တာဗျူးဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Senior Ticketing Executive – Male /Female – (5) Posts /လစာ - ၃၅၀၀၀၀ ကျပ် / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ( ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံ ) ။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - International Domestic Ticketing နှင့်ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည်။ - Computer Word,Excel,Internet & Email အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Ticketing နှင့်ပတ်သက်သော Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - English စာကျွမ်းကျင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Ticketing Executive (International & Domestics - M/F (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ရှိ Travel & Tours တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Ticketing Executive (International & Domestics - M/F (5)Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ + % ကျပ်/ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - International Ticket နှင့် Domestics Ticket ပိုင်း ၌အတွေ့အကြုံ အနည်း ဆုံး ၂နှစ် ရှိရမည်။ - ကျွမ်းကျင်သောTicketing ၀န်ထမ်း များ ကိုဦးစားပေးမည်။ - ပြည်တွင်း လေယာဉ်လက်မှတ်များ ကျွမ်းကျင် စွာဖြတ်တတ်ရမည်။ - Ticketing System များကို ကျွမ်းကျင် စွာ သုံးတတ်ရမည်။ - လက်မှတ် အရောင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အတွေ့ အကြုံ.(၂ ) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - Computerကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်ရမည်။ - English4skills ကျွမ်းကျင် ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_2852" align="alignnone" width="450"] 60631694 - we are hiring jobs, job working recruitment employment business concept employees career hand with megaphone[/caption]
Ticketing Executive - Female/Male (10) Posts
Salary Rang : 300000
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Ticketing Executive - Female/Male (10) Posts / Salary 300000 Kyats / Lanmadaw Township Requirements - Travel and Tour Certificate(eg-Amedus,Sabri,Gillo,training school & Can do online reservation system) - Can use ticketing software and English4skill မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )